VAOVAO TSARA HO FANTATRA (26/10/11) - rov@higa
VAOVAO TSARA HO FANTATRA (26/10/11)
26 Octobre 2011, 22:59pm
Publié par Collectif-gtt.org
Fanolorana an'i Omer Beriziky ho PM - Inona no tanjon'ny ankolafy Zafy Albert?
Tafiditra anatin’ny favori izy raha mahakasika izay ho kandida ho praiminisitra. Ny ankolafy Zafy Albert no nanolotra azy . Ary maro no nanohana tsara ny firotsahany satria hoe Omer Beriziky, satria izy no resaka eto, dia kandida efa manana ny trai-kefa eo amin’ ny serasera amin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, tsy mitovy firehana amin’Andry Rajoelina ary koa natolotry ny mpanohitra ny Fat. Nitana ny laharana voalohany hatrany izy tamin’ireo olona 4 novinavinaina fa tena mendrika ho PM. Rehefa tena natao ny fanadihadiana dia fandrika be napetraky ny Fate indray ity, satria dia olona mpikambana ao amin’ny Leader Fanilo i Omer Beriziky, nefa ny leader fanilo dia antoko manohana an’i Rajoelina( ny talen’ny kabinetran’ny Prezidansa rahateo olona avy amin’ny Leader Fanilo).
Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny antony nanoloran’ny ankolafy Zafy Albert ity olona avy amin’ny Leader Fanilo ity ? Tratry ny velam-pandrika ihany koa ve ny Profesora ? Sarotra ny haminany ny ao an-tsaina fa dia anjaran’ny Profesora Zafy Albert no mitondra fanazavana momba ity raharaha maizina ity. Mialohan’ny 26 Oktobra no fe-potoana nomen’i Rajoelina hanomezana ny anaran’ilay olona hitany fa mendrika ho PM. Mbola tsy tanteraka izany, ary azo inoana fa sakana iray lehibe ny nivoahan’ity resaka Omer Beriziky ity. Mazava be fa matoa tsy nivoaka omaly ny anarana dia satria Omer Beriziky mihitsy no nokasaina hatao ho lehiben’ny governemanta. Tapin-dalan-kaleha ny Fate, mitady hevi-dratsy hafa indray hampandresena ny tolona izay efa lasa afo mololo ankehitriny. Etsy an-danin’izay koa, ny Sadc amin’ny alalan’ny Troïka dia tsy manaiky lembenana fa dia manaraka akaiky ny fizotry ny teo-draharaha. Nampitandrina rahateo Marius Fransmann, tamina gazety vahiny iray mpiseho isan’andro fa dia « tsy hanaiky ny hametraka izay ho Pm tendren’i Rajoelina raha tsy eken’ny mpanohitra io olona io ary raha tsy mifanaraka amin’ny fepetra takian’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ».
Mandra-piandry izay ho Pm eo aloha dia ity ny porofo mazava fa momba ary miaraka tanteraka amin’ny Fate ingahy Omer Beriziky hatramin’ny 2009 mandraka androany.
Delegation-HAT-Bruxlelles-6Juillet2009.pdf : 320.26 Ko
Raveloson Constant : “1000 andro nanaovana fanandramana i TGV” (+vidéo)
Eo am-piandrasana izay mety hahazo ny toeran’ny praiminisitry ny tetezamita dia nanterin’I Raveloson Constant teo amin’ny Kianjan’ny Finoana fa “tsy maintsy asiana setriny ny fahefan’I TGV amin’izao tetezamita izao”. Nazavainy tamin’izany fa tsy misy, na dia olom-boafidy any amin’ny tany mandroso aza, filoham-panjakana omena fahefana tsy misy setriny na « contre-poids » maika fa mpanongam-panjakana omena ny toeran’ny Filohan’ny tetezamita. Nomarihin’i Constant fa tsy nahitam-pahombiazana ny 1000 andro nibodoan’ny mpanongam-panjakana ny hanaovany fanandramana amin’ny fitantanana ny Firenena ka tsy azo eritreretina mihitsy ny hanome fahefana feno azy amin’ny fitantanana ny tetezamita tena iaraha-mitantana.
Voaporofo rahateo fa « tsy tafavoakanareo ny fitondrana an’i Madagasikara » ka tsy tokony hofeheziny hoazy irery ny fahefana. Mbola antony naha-tapa-kevitra ny SADC handray an-tanana ny famahana ny olana ihany koa izany satria tsy takon’afenina eo imason’izao tontolo izao fa nataon’ny FATE kilalao ny fitantanana ny Firenena satria tsy nivonona hitondra i TGV sy ny namany fa sopatra no nazahoany ny fahefana.
Aoka ho fantarina ny fahavalo
Amin’izao ankatokin’ny farany izao dia isan’ny mosavy ataon’ny FATE amin’ny vahoaka Malagasy ny fampiadiana sy ny fanakorontanana ny tokantranon’ny ankolafy telo. « Tsy fahadisoana ny fandalinana saingy atodiho any amin’ny fahavalo ny fiadiana rehetra » hoy ihany Raveloson Constant. Maro ny zava-mitranga tokony mahaliana sy tokony harahi-maso ankehitriny. Isan’izany ny fanangonana zatovo ofanina ho mpiakarama an’ady any Manjakandriana any. Alain Ramaroson no fanatatra fa manao izany amin’izao fotoana izao ary azo inoana fa tsy miafanalavitra amin’ny fisakanana ny fanatanaterahana ny andininy faha-20 ao amin’ny tondro zotra izao teti-dratsy izao.
Misokatra amin’ny FATE ny Ankolafy Zafy (+vidéos)
Miha-mazava ankehitriny ny lalana itondran’ny Ankolafy Zafy ny famahana ny krizy. Niteraka resa-be teo amin’ny sehatry ny vaovao politika tokoa ny fanoloran’ny Pr. Zafy Albert an’I Beirziky Omer izay tsy mpikambana ao amin’ny ankolafy tarihiny fa mpikatroka “Leader Fanilo”. Ity antoko farany ity izay isan’ny nanohana an’I TGV tamin’ny fanonganam-panjakana ary ny talen’ny kabinetra an’I TGV amin’izao fotoana dia avy amin’io antoko naorin’ny Herizo Razafimahaleo io toy ny minisitry ny vola voalohany notendren’I TGV.
Sary Ankolafy Zafy Albert
Nahasarika ny sain’ny mpanara-baovao politika ihany koa ny fivoahan’ny anaran’ity masoivoho teo aloha ity tao anatin’ny delegasiona nentin’ny FATE nandresy lahatra ny Vondrona Eoropeana tamin’ny 2009. Fandresen-dahatra niompana indrindra tamin’ny fangatahana famatsiam-bola sy fankatoavana avy amin’ny vondrona eoropeana mba ahafahan’ny FATE miasa am-pitoniana.
Na ny samy mpanaraka ny Pr. Zafy aza dia tsy mitovy hevitra manoloana ity kandida natolotrin’ny mpitarika azy ireo ity. Nisy ny nilaza fa tokony nifampiresahana aloha vao nandray fanapahan-kevitra toa ireny. Ireo mpikambana ao amin’ny Ankolafy Zafy Albert izay mpanao kianja kosa dia mahita fa “tokony tohanana ny fanapahan-kevitrin’ny Profesora”.
Fisokafana “teknika” hono …
Rehefa nanontanian’ny mpanao gazety mikasika ny maha-olon’ny FATE an’I Beriziky ireto mpomba ny Pr. Zafy ireto dia nilaza mazava fa “efa lalana mankany amin’ny fifampihavanana sahady ny nanolorana azy ho kandida satria teknisiana “intègre” I Omer Beriziky ka afaka manampy tsara amin’ny fandrsen-dahatra sy ny fanarenana ny Firenena”.